पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चिया बगानमा कार्यरत मजदुरले पाएन्न तलब ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चिया बगानमा कार्यरत मजदुरले पाएन्न तलब !
काठमाडौं । ज्याला नपाएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वामित्वमा रहेको झापास्थित हिमालय–महालक्ष्मी चिया बगानका मजदुर श्रम कार्यालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । चिया बगानले कलडाउनको अवधिमा ज्याला र अन्य सेवासुविधा नदिएपछि उनीहरु श्रम कार्यालय पुगेका हुन् ।
बुधवार श्रम कार्यालय पुगेका उनीहरुले आफ्नो माग सुनुवाई गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भद्रपुरस्थित श्रम कार्यालय पुगेका उनीहरूले समयमा ज्याला नपाएको तथा अन्य पारिश्रमिक पनि नदिएको गुनासो गरेका छन् । आफुहरुले पाउनुपर्ने ज्याला र सुविधा उपलब्ध गराइदिन समेत माग गरेका छन् ।
ज्यालाबाट सञ्चय कोषको पैसा काटे पनि खातामा जम्मा नगरेको, दुई वर्षअघि मजदुरले आन्दोलन गरेको समयमा सहमति भएको २५ सय रूपैयाँ र ०७५ साउन १ गतेदेखिको बढेको ज्याला पनि नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बगानबाट सेवानिवृत्त हुँदा पनि उपदान र बगानले सञ्चय कोषबापतको पैसा नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, साउन ३ २०७७ १७:०१:२२